Hordhac: Crystal Palace vs Manchester United: LVG Oo Wiilashiisa Ka Doonaya IneyCadaadis Saaraan Hogaanka Soona Afjaraan Gool La'aantaHeysata
Saturday October 31, 2015 - 13:14:07 in Sports News by Mogadishu Times
Manchester United ayaa dooneysa iney cadaadis saarto kooxaha Man City iyo Arsenal kuwaas oo ah kuwa ugu sareeya horyaalka, sidoo kalana waxey baadi goob ugu jiraan soo afjarida dhibaatada gool la'aan ee ku habsatay kulamadii ugu dambeeyay. Cr
Manchester United ayaa dooneysa iney cadaadis saarto kooxaha Man City iyo Arsenal kuwaas oo ah kuwa ugu sareeya horyaalka, sidoo kalana waxey baadi goob ugu jiraan soo afjarida dhibaatada gool la'aan ee ku habsatay kulamadii ugu dambeeyay. Crystal Palace sadex guuldaro oo xiriir ah ayaa soo gaaray kulamadii ugu dambeeyay dhamaan tartamada oo dhan, halka Manchester United aysan wax guul ah gaarin labadii kulan ee ugu dambeeyay dhamaan tartamada oo dhan.
Kulanka: Crystal Palace vs Manchester United
Saacadda: 6:00 Maqribnimo (Xiliga Geeska Afrika)
Garsoore: Mike Jones (England)
Dhibaatada ugu xoogan oo uu qabo Alan Pardew waxey tahay dhaawaca soo gaaray Yohan Cabaye kulankii Manchester City waxaana laga cabsi qabaa inuu seego kulanka manta, sidoo kale macalinkaan reer France ayaa horay ay uga maqnaayeen. Souare, Wickham iyo Chamakh.
Dhanka kale Louis Van Gaal ayaa dib ugu yeeri doona Martial, Mata, Herrera iyo Martial kuwaas oo aan kusoo bilaaban kulankii Middlesbrough.
Darmian ayaa filanaya inuu mar kale kusoo bilowdo daafaca midig madama Antonio Valencia uu xanuun qabo wali.
LINE UPKA MACQUULKA AH
Crystal Palace wali guul kama gaarin Manchester United kulamada Premier League-ga, 10-kulan ayey Red Devils guul gaartay halka 2-kulan ay barbaro galeen.
Juan Mata ayaa ah libaaxii sanadkii hore kala diray Crystal Palace isagaana labada kulan goolal dhaliyay, (1-0) ayey ku badisay United kulankii Old Trafford, halka kulankii Selhurst Park ay mar kale ku badisay (1-2).